नाम दिन एक विशेष दिन हो। जस्तै सेन्ट जॉन अफ्रोनले भन्यो, हामी स्वर्गदूतको दिन मनाउँदछौं जुन हाम्रो स्वर्गीय संरक्षक हामीलाई सम्झन्छौं र हाम्रो आत्मा र शरीरको स्वास्थ्यको बारेमा प्रभुलाई प्रार्थना गर्दछौं। नाम दिन वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो, जब तपाईंका सबै विचारहरू परमेश्वरलाई निर्देशित गरिनुपर्छ र सबै कुराको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। यो राम्रो हुनेछ भने स्वर्गमा परी अन्स्टासास को दिन चर्चित छ। यो अनन्त र ट्रांजिटको बारेमा सोच्ने उत्तम समय हो। यो आत्माको लागि राम्रो के हो भन्ने सोचको लायक छ, र के राम्रो छैन।
कोनस्टस्टेडको जॉनले प्रार्थनाको बारेमा धेरै बुद्धिमानी कुराहरू, धार्मिक जीवन र ईश्वरको प्रेमलाई बोलाइयो। उनी सबैलाई सल्लाह दिन्छन् जसले मदतको लागि आफ्ना संरक्षक संतहरूलाई फर्काउँछ , अनन्तताको बारेमा सोच्नुहोस् र जीवनको एक मामूली मार्गको नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। एन्जल एनास्ट्स्सासियाको दिन यो मा ध्यान दिनुहोस। आफ्नो पड़ोसीहरूलाई सहयोगको बारेमा पनि नबिर्सनुहोस्। जॉन हाम्रो सबै संरक्षकबाट सिक्न सिफारिस गर्दछ सबैभन्दा उच्च प्रेम, विश्वव्यापी भक्ति, उचित प्रार्थना, उपवास, निर्वासनबाट छुट्याउने प्रेम। एकलाई पनि बिरामीहरू, दुर्भाग्यवश र शोकबाट बच्न सन्तानहरू कसरी ध्यान दिनुपर्छ: तिनीहरूले तिनीहरूको कडा जीवनको बारेमा गल्ती गरेनन्, तर कठिन परिस्थितिबाट घृणा गर्थे।
Anastasia को लागि नाम दिन कब हुन्छ?
स्वर्गदूत अन्नास्तियाको दिन जनवरी 4, अप्रिल 28, मार्च 23, नोभेम्बर 11 र 12 मा हुन्छ। जन्मदिन पछि केही दिन मनायामा नामाकरण गरिन्छ।
सेन्ट एंस्ट्रासिया द ओवेस्नेटिनेनिट्स
संन्याले हाम्रो लागि उदाहरण बसाए, उनीहरूले कसरी जीवन बिताउन भनेर देखाउँछन् । चाइना शहीद अन्नासासिया को संरक्षक याद राखौं, जुन चर्च जनवरी4मा मनाउँछ।
यो सुन्दर स्त्री रोममा जन्मिएको थियो। उनको बुबाले पग्लु देवताहरूको पूजा गरे , र तिनको आमाले ख्रीष्टमा विश्वास गरे, तर उनले यसको बारेमा कसैलाई बताएनन् - ती दिनहरूमा यसको बारेमा फैलाउन खतरनाक थियो। उनको जवानमा केटीको शिक्षक धर्मी र व्यावहारिक क्रिसोगन थियो, जसले ईसाई धर्मलाई प्रस्ट पारे। जब अन्नासासियाको आमाको मृत्यु भयो, तिनका बुबाले दुर्भाग्यवशलाई पम्पप्लसित विवाह गरे। उहाँ मूर्ख हुनुहुन्थ्यो र केटी अत्यन्तै कष्ट थियो कि उनी उनको साथ जिउँथे।
कैदीहरूका लागि गहिरो दया संग अन्नासासिया, जसले येशूलाई आफ्नो विश्वासको दोषी ठहराए। उनले प्राय: रगहरू राखे, ताकि सबैले एक माग्नको लागि लिन सक्थे, र त्यो उनको दासी संग एक साथ डुङ्गा को प्रवेश गर्नेछ। यदि तपाईं यो संतको नाम लिनुहुन्छ भने, के तपाईं अरूको खातिर के गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुहोस्। वैसे, हामी पहिले देखि नै जान्छ जब अन्नासासियाले दूत को दिन मा चिन्हित गर्दछ। यो अवकाश कुन मिति हो, हामीले माथि उल्लेखित छौँ। केटीले कैदीको खाना ल्याए, उनीहरूको उपचार गरे र प्रायः पैसा तिर्नु भएको थियो। जब उनको पतिले दासीबाट यो सबै कुरा सिके, उनले उसलाई पिटे र घर छोडेर उसलाई छाडेनन्। तर केटीले पत्राचारमा आफ्नो शिक्षक संग सान्त्वना पाए, जसले उनीहरूलाई हृदय गुमाउनु नदिने र अधिक चोटि ख्रीष्टलाई क्रूसमा लिने गर्भधारणको सम्झना गर्न को लागी थिएनन्। यसले उनको बल दिन सक्थ्यो। शिक्षकले अन्टासासियालाई लेखे कि समुद्रले यात्रा गर्दा उनको पति मर्नेछ। चाँडै पम्पप्लियस फारस गए, तर कहिलेकाहीँ उनी आफ्नो गन्तब्यमा आइपुगेनन् - उहाँले डुङ्गा गर्नुभयो। आफ्नो पतिको अत्याचारबाट आफैलाई स्वतन्त्र बनाइए, अनस्तसियाले उनीहरूलाई गरिबको सबै चीज छोड्न थाले।
संत संसारभरि भटक गर्न थाले। केही समय अघि, तिनले केही मेडिकल ज्ञान प्राप्त गरेका थिए, र त्यसपछि उनीहरूलाई प्रथामा प्रयोग गरे, कैदीहरूलाई मदत गर्छन्। यो केही थिएन किनकि संत उसोसिटेलिनिट्स भनिन्छ जुन उनले धेरै समस्याहरु संग छुटकारा पाउने प्रयास गरे जुन सतावटमा छन्। स्वर्गदूत अन्नास्टासियाको दिन (हामीलाई सम्झँदा हामी जन्मदिनको आधारमा निर्धारण हुन्छौं), हामीले प्रार्थना गर्नु पर्छ कि स्वर्गीय पार्थिवले उसलाई दुर्भाग्यवश देखि बचाउनेछ।
गिरफ्तार र विफलता
केहि समय पछि, अनस्तसियाले युवा र धर्मी थिओयोतिथिससँग भेट्थे, जसले हालै आफ्नो पतिलाई मृत्यु गर्यो। केटीले आफ्ना असल काममा संतलाई मदत गर्न थाले। तर ती दिनमा मसीहीहरू विरुद्ध सतावट भोगिरहेका थिए, तिनीहरूलाई सताइयो। एनिस्ट्रियामा जब उनी इलिलीरियामा थिए। एक पटक गार्डले उनलाई क्षेत्रीय राज्यपालमा लिन निर्णय गरेपछि। निस्सन्देह, उसलाई उनको विश्वास त्याग्न निमन्त्रणा गर्यो र पेंटमा पेंट गर्न थाले। तर सबै कुरा केवल शब्दहरू मात्र सीमित थियो, र चाँडै क्षेत्रका शासकले उनलाई उलियानलाई पठाए, जसले त्यसबेला कैपिटल पुजारी थियो। उहाँ अत्यन्तै क्रूर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँका मानिसहरू मजाक गर्न उहाँ आनन्दित थिए। उनले छनौटको सामने संत राखे: क्रिस्ट - क्रनिक जीवन, धन, अनोखा खजाने, उत्कृष्ट पोशाक र विनाश को मामला मा - अन्यथा - भयानक पीडा र भयानक अत्याचार। तर उनले अनस्तसियालाई आफ्नो विश्वास धोकाउनको लागी मनाउन असफल भए - पीडित छनौट गरे।
स्वर्गदूतको दिन अनन्तसासियाले यस केटीको साहसलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। र तपाईं उनको स्थानमा कसरी कार्य गर्नुहुन्छ? तर संत यति चाँडै मर्नुको लागि नियत थिएन - त्यहाँ एउटा घटना थियो जुन उनको जीवन लामो भयो। पुजारी केटीको सुन्दरताले प्रभावित भएको थियो र उनको बलात्कार गर्ने निर्णय गरे, तर उनले पनि उनको छुट्याउन समेत प्रबन्ध गरेनन् - एक क्षणमा उनले आँखा गुमाए। आफ्नो आँखामा एक भयानक पीडा उसलाई घर बाहिर चिच्याउन, उनले मूर्ख मन्दिर तिर लागे, देवताहरूलाई उहाँलाई निको पार्न माग गर्दै, तर अचानक त्यो मैदानमा गयो र बित्यो। अस्टस्तासिया र थिओडोटुसले यसरी कैदबाट बच्न।
लामो समयसम्म संत ठूलो थियो, चाँडै उनी फेरि पकडेका थिए र समुद्रमा डुब्न निर्णय गरे। तर फेरि चमत्कार भयो: मानिसहरू भाग्न व्यवस्थित भए, तिनीहरू अचेत गए। तथापि, यस पछि चाँडै, दुर्भाग्यवश मरिसकेको थियो। सेन्टा अन्स्टासासियालाई पनि क्रियान्वित गरिएको थियो: चार स्तम्भहरू जमीनमा घुम्न थाले, उनीहरूको बीचमा आगो लगाइएको थियो, र तिनीहरूले आगोमा अशुद्ध महिला बढाए।
जीवनको रूपमा, संतले पीडाको मानिसहरूलाई मदत गऱ्यो, र अहिले तिनी यो राम्रो काम जारी राख्छन्। यदि तपाईंले उनको नाम लिनुभयो भने जनवरी4मा प्रार्थना गर्न नबिर्सनुहोस्। स्वर्गदूत (नाम-दिवस) को दिन पनि, अन्नासासियाले त्यो उत्सव तालिकाको आवरण गर्नुपर्दछ र सबैलाई निम्तो दिनेहरूलाई निम्तो दिनुपर्छ।
पवित्र चेहराको मुक्तिदाताको पेरोवोमा मन्दिर: इतिहास, हाम्रो दिन
बप्तिस्माको लागि टेपेस्ट्री के हो? एक हात आफ्नै बप्तिस्माको लागि क्रीज्मा
को स्नान को उचित स्थापना: थाहा दिनुहुन्न?
ल्याप्टप छैन सुरु किन, के गर्ने? सम्भव गल्तीलाई सूची
प्रहरी गर्न आवेदन अवधि के हो?
सरल र स्वादिष्ट केक "Mannik": खट्टा क्रीम वा दही संग नुस्खा